Android Pattern Lock ကျသွားရင် ပြန်ဖြည်နည်းများ - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Lock/Unlock Password ဆိုင်ရာ Phone Application နည်းလမ်းများ Android Pattern Lock ကျသွားရင် ပြန်ဖြည်နည်းများ
Maung Pauk at 6:08:00 PM Lock/Unlock, Password ဆိုင်ရာ, Phone Application, နည်းလမ်းများ,
မင်းမင်း: Lock Pattern ကို အကြိမ်များစွာ မှားတဲ့အတွက် ဖုန်းပြန်ဖွင့်လို့မရ ဖြစ်နေပါတယ် ဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာ ကူညီပါအုံးဗျာ....
ဒေါင်းပြီးရင်တော့ သင့်တော်ရာနေရာမှာ ဖြည်ထုတ်ပါ .
Command Window တက်လာပါလိမ့်မယ် .
Pattern Lock ကျနေတဲ့ ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့်လျက်ထားပြီး ကွန်ပျုတာနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ .
အောက်မှာပေးထားတဲ့ command တွေကို copy ကူးပြီး Command Window ထဲမှာ Paste လုပ်ပါ . ပြီးရင် Enter ခေါက်ပေးပါ..။
စက်ပြန်တက်လာအောင်စောင့်ပေးပါ . တက်လာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာ Pattern Lock က မပြုတ်ပဲ ကျန်နေပါလိမ့်ဦးမယ် . အဲဒီအတွက် နောက်ထပ် Command တစ်ကြောင်းထပ်ရိုက်ပေးရပါဦးမယ်
Video ကို ဒီ Link မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်....။
ဒီနည်းလမ်းကို လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး SD ကဒ် နဲ့ SIM ကဒ်ကိုဖြုတ်ထားတာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်....
Android ဖုန်းများတွင် မိမိပေးထားသော Pattern Lock မေ့သွားရင် ဖုန်းကို Hard Reset လုပ်ပြီးပြန်ဖြည်နိုင်ပါတယ်။
Hard Reset လုပ်ရန်အတွက် Recovery ထဲကိုဝင်ရပါမယ်
Recovery ထဲဝင်နည်းတွေကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူကြပါဘူး
မိမိဖုန်းရဲ့ Hard Reset Key ကိုလိုချင်ရင်တော့ Internet မှာ (ဥပမာ - Huawei C8600 Hard Reset Key ဆိုပြီး ) ရှာကြည့်ပါ
ယခု ကျွန်တော့်ကတော့ Samsung Galaxy Fit ရဲ့ Recovery Mode ထဲကိုဝင်ပြပါ့မယ်
(၁) ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ
(၂) Home Button နဲ့ Power Button ကို ၁၅ seconds လောက်ဖိထားပါ (Samsung Logo
Recovery Mode ထဲရောက်ရင်ဖိထားတာကိုလွှတ်လိုက်ပါ..။
(၃) အဲဒီထဲက Wipe data/ factory reset ဆိုတာကိုရွေးပြီး Yes ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
(၄) ပြီးရင် ဖုန်းကို Reboot လုပ်ဖို့အတွက် အပေါ်ဆုံးက Reboot system now ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
(၅) ဒါဆိုရင် ဖုန်းပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာ Pattern Lock ဖြည်ပြီးသွားပါပြီ
မှတ်ချက်(၁) - Recovery Mode ထဲတွင် Touch Screen အလုပ်မလုပ်ပါ
ဒါကြောင့် မိမိရွေးလိုသောစာကြောင်းကိုသွားရန် Volume Up နဲ့
Volume Down ခလုတ်တွေကိုသုံးပါ
မိမိလိုချင်သောစာကြောင်းကိုရောက်ရင် Power Button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ
မှတ်ချက်(၂) - Hard Reset လုပ်ရင် မိမိဖုန်းအတွင်းရှိ Contact, Message နဲ့ Application
ဒါကြောင့် Hard Reset မလုပ်မီ မိမိဖုန်းကို Computer နဲ့ချိတ်ပြီး PC Suite တစ်ခုခုနဲ့
Credit to: http://thetkhineu.blogspot.com/
How to Factory Reset Android when locked?
One can easily factory reset the phone when unlocked. But how to reset it when the phone is locked. Here is the solution
Press Volume UP + Home + Power buttons till the Samsung logo appears.
This will launch the recovery mode for Android Phone
Now chose the option to wipe data/ factory reset.
Note : In the recovery mode , touch screen doesn't works. You have to use the volume keys to go UP and DOWN. To select press power button or home .
Credit to: http://wtf-tricks.blogspot.com/
ဖုန်းထဲမှာ google account တော့ ဝင်ထားဖို့လိုပါတယ် ...
ပီးတော့ ဖုန်းချလိုက်ပါ ...
Unlock Pattern မှာ ငါးကြိမ်ထက် ပိုမှားခဲ့ရင်တော့ " you have incorrectly drawn your unlock pattern5times. Please try again in 30 seconds. " ဆိုပြီး ပေါ်လာပါမယ် ...
Credit to : http://winkabarkyaw.blogspot.com
Credit to: Mutual Friend (ပြည်)
Lock/Unlock, Password ဆိုင်ရာ, Phone Application, နည်းလမ်းများ
Lock/Unlock Password ဆိုင်ရာ Phone Application နည်းလမ်းများ